Madaxweynaha Xasan sheikh oo safaro uu ku tegayo ilaa USA ay maanta uga bilowdeen Talyaaniga – Radio Daljir
Seteembar 17, 2013 5:05 b 0
Roma, September 17, 2013 – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud ayaa waxaa maanta u bilowday safar dhowr maalmod badan qaadan doona, kaas oo uu ku marayo dalal ka tirsan Yurub ilaa USA, isagoo ugu dambeyn booqan doona fadhiga Qaramada Midoobey ee New York.
Madaxweynaha Soomaaliya xasan sheikh Maxamuud iyo wefdi ka tirsan dowladiisa ayaa maanta ka duulay Brussels, ?waxayna u amba u dhaqaaqeen magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, halkaas oo ay joogi doonaan muddo labba maalmood ah, waxayna kulamo la qaadan doonaan madaxda Talyaaniga.
Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow) ayaa sheegay in safarka Talyaaniga kadib uu madaxweynaha Soomaaliya tegi doono Washintong DC oo ay isku arki doonaan madax sar sare oo ka tirsan USA.
Eng. Yariisow ayaa xaqiijiyey booqashada madaxweyne Xasan sheikh ee Washintong kadib in uu madaxweynuhu tegi doono gobolka Ohio, halkaas oo ay isku arki doonaan Soomaalida gobolka degan.
Ugu dambeyntii safaraka madaxweynaha Soomaaliya ayaa u jihaysan doona dhinaca magaalada New York ee dalka Maraykanka, halkaas oo uu ka dhacayo fadhiga guud ee Qaramada Midoobey, madaxweynaha ayaa arrimaha Soomaaliya ee wakhtigan ka sheegi doona shirka QM.